Iifoto ezinomdla zezakhiwo ezishiyiweyo nguMatias Haker | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iifoto ezinomdla zezakhiwo ezishiyiweyo nguMatias Haker
Matthias haker Uzalelwe kwaye wakhulela ePotsdam, eJamani (1984), uxhotyiswe nge-SLR yakhe ngalo lonke ixesha, kodwa ukonwaba kwakhe okokuqala ngempumelelo yakhe yokufota yajika yaba livila. Umnqweno ophantse ulibaleke awayenawo iminyaka wavuselelwa ngo-2008 ngefoto yedijithali. Ukusukela ngoko wachitha lonke ixesha lakhe lokuthatha iifoto kwaye ezivavanya. Amathuba amatsha awafumeneyo amhambisa kumdla wexesha elidlulileyo awayewulibele. Inkqubo ye- iindlela ezintsha zokulungisa umfanekiso, kunye nemixholo eyahlukeneyo kwiifoto yayiyeyona nto ibalulekileyo utshintsho ebomini bakho.
Ukuphulukana neyantlukwano enkulu yokufota, wayengakwazi ukuzikhawulela kwisifundo esinye, kwaye wasebenzisa amagama akhe ahlukeneyo ukuphinda ayile ubuchule bakhe. UMatias Haker ngu Ukuzenzekelayo umfoti ngoku uhlala eDresden, eJamani. Kwaye kunjalo ngokukodwa kwi-architecture kunye nokufota kwangaphakathikunye abantu, Imifanekiso, la fashini kunye ukufota komtshato.
UMatthias Haker unomdla okhethekileyo wobugcisa ekuphononongeni ubume bokuyilwa kwabaninzi izakhiwo ezishiyiweyo ifunyenwe. Apho ukubola kwamagumbi okwamkela iindwendwe ehotele ishiyiwe Ukulahleka kubathengi bakho, kubenza bavuselele. Ekuboneni kokuqala kwiifoto zakhe kubonakala ngathi ziyimizobo, kuba yena ubuhle obungabonakaliyo enokufunyanwa ngaphakathi komaleko uyilo ekonakaleni kwalo.
Ukukhusela iindawo zakho ekonakalisweni nakubusela, Matthias Hacker shiya umfanekiso ngamnye ungaphawulwanga, Iteknoloji egcina ukuthembeka kwezi zakhiwo ngelixa usongeza i- imfihlakalo kunye nomtsalane osisiseko sokubamba kwakhe. Emva koko sikushiya igalari enomdla kunye neefoto endizithandayo, ziyamangalisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iifoto ezinomdla zezakhiwo ezishiyiweyo nguMatias Haker
UMargaret Trobat sitsho
Phendula uMargarita Trobat
Amanyathelo angenasiphelo wokubuyela kuyilo lwegraphic